> Resource> iPad> otú nyefee faịlụ site iPad ka Android
Were nza nke photos na gị iPad na chọrọ nyefee gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Echekwa multiple songs na vidiyo na gị iPad na ike na-eche ka ịgbanwee gaa na gị gam akporo ngwaọrụ maka ụtọ na ọ laa? Ihe ọ bụla agha gị, otu ihe ị ga-eche banyere bụ otú ime ka mgba ọkụ. Lee ndị ngwọta m nwere ike ikwu gị.
Free Ngwọta Ugwo - Ngwọta MobileTrans
Foto na igwefoto Roll: efego iPad dị ka ihe mpụga ike mbanye;
Foto na Photo Library na iPhoto: dịghị ụzọ dị
Mmekọrịta zụrụ music / vidiyo na iTunes na Android ngwaọrụ
Mmekọrịta kọntaktị site na Google
Download otu ngwa site Google Play
Mkpa a nkeji ole na ole
Otu click nyefee niile videos, photos, music na kọntaktị
Wepụ na transfer odide ndị e si iMessages
Na-ewe ọtụtụ nke oge ịchọ ihe ngwọta
Nyefee faịlụ otu otu
Mgbe nyefe, na music ma ọ bụ video nwere ike ghara igwu egwu
Ada nyefee ngwa site iPad ka Android
Ngwọta 1: Nyefee si iPad ka Android Kpamkpam
Ngwọta 2: Gbanye si iPad ka gam akporo na MobileTrans (ngwa ngwa ma ọ bụghị free)
1. Nyefee foto site na iPad ka Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba
N'etiti ndị niile faịlụ, foto na iPad Igwefoto Roll na-adị mfe nyefee. Ebe a na-aga nzọụkwụ.
Ugwu gị iPad na kọmputa dị ka ihe mpụga ike mbanye site ịkwụnye a eriri USB. Emeghe ya na-ahụ DCIM nchekwa. Foto niile ị na-na download na-ahụ.
Jikọọ gị android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na kọmputa na eriri USB. N'otu aka ahụ, ịnyagharịa ya ike mbanye.
Mepee Android ike mbanye na-ahụ ma ọ bụ mepụta a foto nchekwa.
Detuo foto site na iPad DCIM nchekwa gị Android foto nchekwa.
2. Nyefee music na vidiyo si iPad ka Android
O doro anya na iTunes-enye gị ohere nyefee zụrụ music na vidiyo si iPad na ya. N'ihi ya, ị pụrụ ịgbaso n'ụzọ mgbe i nwere otutu music na vidiyo na-agafere.
Jiri eriri USB jikọọ gị iPad na kọmputa na-agba ọsọ iTunes.
Pịa Store> ikikere nke a Computer na ndenye Apple ID na paswọọdụ nke na-eji ịzụta ihe music na vidiyo.
Mgbe gị iPad achọpụtara na gosiri na ekpe sidebar, nri pịa gị iPad na-egosi ndọpụta ndepụta. Mgbe ahụ, họrọ Nyefee zụrụ ....
Gaa na iTunes media nchekwa na kọmputa. Site na ndabara, ọ na-azọpụta ha n'oge C: \_ Ọrụ \_ Administrator \_ Music \_ iTunes \_ iTunes Media.
Ugwu gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba dị ka a USB ike mbanye na mado egwu na videos si iTunes media nchekwa.
Ị pụrụ ịhụ na ụfọdụ music na vidiyo na-egwu ọma na gị iPad, ma ike igwu gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, dị ka MOV, M4P, M4R, M4B. Na nke a, ị ga-ahụ ụfọdụ ọdịyo na video Ntụgharị iji tọghata ha mbụ.
3. Nyefee kọntaktị site na iPad ka Android
Iji nyefee iPad kọntaktị na na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, Google mmekọrịta bụ ezi nhọrọ. N'agbanyeghị ma gị iPad na-agba ọsọ iOS 9/8/7 ma ọ bụ iOS 5/6, ọ pụrụ ime na gị.
Mgbe gị iPad na-agba ọsọ iOS 7, biko soro nzọụkwụ n'okpuru:
Na gị iPad, mgbata Ntọala> Gburu, Ndi ana-akpo, kalenda> Tinye Akaụntụ> Google.
Wet ke gị Google akaụntụ Ama: aha, aha njirimara, paswọọdụ na nkọwa
Enweta Next ma hụ na Ndi ana-akpo icon agbanwuru.
Enweta Save na kọntaktị mmekọrịta.
Gaa gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na mgbata Setting.
Họrọ Akaụntụ & mmekọrịta na jupụta na akaụntụ Ama na mgbe ahụ enweta mmekọrịta Ndi ana-akpo.
Mgbata mmekọrịta Ugbu a ka mmekọrịta Google kọntaktị gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Mgbe gị iPad bụ na iOS 5 ma ọ bụ iOS 6, na-agbalị na-esonụ:
Mgbata Ntọala na gị iPad.
Mgbata Gburu, Ndi ana-akpo, kalenda> Tinye Akaụntụ.
Họrọ Ndị ọzọ> Tinye CardDAV Akaụntụ.
Tinye akaụntụ gị Ama: Service, aha njirimara, paswọọdụ na nkọwa.
Enweta Next n'elu nri akuku na-atụgharị na Ndi ana-akpo.
Na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, mgbata Setting> Accounts & mmekọrịta.
Tinye Google akaụntụ na enweta mmekọrịta Ndi ana-akpo> mmekọrịta Ugbu a.
Cheta na: Ebe a na-nkọwa ndị ọzọ banyere syncing gị iPad na Google akaụntụ.
Otú ọ dị, ihe nwere ike tụkwasịrị bụ na ndị nile gam akporo igwe na mbadamba-enye gị ohere ka mmekọrịta Google akaụntụ. Nke ahụ bụ ikwu, i nwere ike nwere ike iji Google mmekọrịta.
4. Nyefee ngwa site iPad ka Android
Achọghị ida ọkacha mmasị gị ngwa mgbe ịmafe si iPad ka Android? Echegbula. The Google Play abịa maka gị. Ọ bụ nnukwu Android ngwa download center, nke na-ahapụ gị ngwa ngwa ahụ ihe ị chọrọ.
Ma ihe ndị ngwa ị kwụrụ, i nwere ike na-agbalị iji nweta aka na ngwa Mmepụta ma ọ bụ na ngwa ahịa iji hụ ma ị nwere ike ịgbanwe .ipa, .pxl, wdg version ka .apk version na a obere na-eri.
Ike wee gwụ okodu a ụbọchị dum n'ihu kọmputa-achọ na-agbalị free ngwọta na-achọ ịhụ ihe mfe na-adaba adaba otu? The ọkachamara ekwentị transfer ngwá ọrụ - Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac bụ ihe niile ị chọrọ. Nanị otu click, kọntaktị niile, photos, iMessages, kalenda, video na music ga-Switched si iPad ka Android. Dum usoro dị nnọọ na-ewe gị a nkeji ole na ole, nke n'ezie na-azọpụta ndụ gị.
Download Wondershare MobileTrans inwe a-agbalị.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPad na gam akporo ngwaọrụ na kọmputa
Gbaa ndị Wondershare MobileTrans na kọmputa na-eji USB Gịnị jikọọ gị iPad na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na kọmputa kwa. iTunes ga-arụnyere iji hụ na Wondeshare MobileTrans na-arụ ọrụ nke ọma.
Cheta na: The Wondershare MobileTrans arụ ọrụ nke ọma na otutu Android ntị na mbadamba, gụnyere Samsung, Google, HTC, Sony, Motorola, LG, Huawei, ZTE, Acer, na ọzọ.
Nzọụkwụ 2. Copy music / foto / videos / iMessages / kalenda / kọntaktị site na iPad ka Android
Dị ka ị na-ahụ, ma gị gam akporo ngwaọrụ na iPad na-egosi na ihe bụ isi window. All ọdịnaya ị pụrụ iṅomi na-enyocha. N'ihi ya, pịa Malite Copy na-amalite nyefe.